"UMHLABA OF Tunxi" - umdlalo othandwa kakhulu. Iqukethe umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi nezici ezifihlekile ezenza kumelwe kuqondwe ngokombono ukuze ube umdlali yimpumelelo.
Beginners ngokuvamile abangalwazi zonke imininingwane yokwephula esishintshashintshayo for World of Tanks. It is kuphela izimpi ezaziwayo. Bona bacibishele nanoma yini enyakazayo, ngisho ecabanga yokuthi tank ngalinye has a endaweni Breakout for World of Tanks.
ithangi ngalinye has endaweni yawo, lapho zempi emaningi kakhulu, noma, kunalokho, mncane. Ukwazi zonke lezi zindawo, ungakwazi njalo ukusebenzisa "umonakalo" (ie umonakalo). Abanolwazi ithangi nabasebenza abaye bachitha ezingaphezu kwenkulungwane izimpi, wazi ukuthi endaweni Ukungena for World of Tanks, futhi usebenzise yonke le ulwazi ngokumelene nezitha zawo. Futhi, eqaphela izimfanelo imoto yakhe, ungakwazi ukufaka isitha kuphela ezinezivikelo eziqinile ingxenye. Uma bacibishele okungahleliwe, singasho okungenzeka amaphesenti ayikhulu, ezokwenza Ricochet.
Ekuqaleni, abadlali, uma bebona i tank isitha, ayomhlangabeza qhubekela phambili. Lokhu akulungile, ngoba ingxenye okuqondile sikebhe futhi turret tibheke cishe zonke zempi. Inqamuka kuphela amathuluzi anamandla amathangi aphakeme. Le ndawo okuqondile Ukungena for World of Tanks - lena esivelele Commander.
Njengomthetho, cishe zonke amathangi njalo wenze indlela yabo kule ndawo. Uma uphumelele lapho, kungenzeka ukukhubaza kumlawuli, wayenikeza inzuzo ethile ngenxa oMfelandawonye. Ungazama futhi ukudubula esikhungweni salo mdlalo - kuba indawo ngaphambili, lapho amathrekhi ukukhwezwa. Ukuthwebula lapha, ungafaka ethangini kwi "nogubhu" (umonakalo isibungu) bese-ke ngeke ukuthutha.
Le ndawo eyinhloko Ukungena for World of Tanks
Ngokuyinhloko, abadlali abanolwazi ozama ukungena isitha sakhe e ebhodini noma karma. Kuyinto lezi zindawo okungenani luvikelwe tank ngalinye. Uma ufika ibhodi, ngeke bakunike ithuba "umonakalo ngokugcwele" (umonakalo ephelele), kodwa futhi sixhumane ezinye nabasebenza, noma ngisho kulimaze imishini. Ukuthwebula ku ohlangothini, ungakwazi ngomlilo tank isitha. Phakathi evutha, libanga umonakalo, imishini ezilimele futhi incapacitate crew. Uma umlilo athole ukuthi yini ukulwa iphakethe, ithangi umane qhumisa. Kodwa lokhu kwenzeka thukela.
"Skins" I-World of Tanks (Breakout zone)
Ikakhulukazi Wabasaqalayo ukudala nezimfashini ezibonisa indawo imishini kanye nezisebenzi ngaphakathi. Kubonakala sengathi lokhu: ngamunye amathangi imakwe izimpawu, okuyinto uqoke ohlezi lapho. Olude, ayizwakali: bamane abakwazi ukubona, kodwa uma isitha iseduze, lezi "izikhumba" kuyabonakala.
Ikakhulukazi Wabasaqalayo kubalulekile ukufunda ukulithola ezonini sekungaphezu kwamandla ethu, kunokuba ngobudlabha. Ngenxa 'isikhumba "kungaba fast ngokwanele ukukhulisa ukusebenza kwabo empini.
Kanjani ukuze uthole boeukladku
sengozini enjalo njengoba ukulwa iphakethe, kukhona njalo ucezwana lokudla nganoma yisiphi isidlali. Thola bese hit kunzima ngokwanele, ngoba mdlalo ashukumisayo, futhi ungene iphuzu othize epheshaneni kunzima kakhulu. Boeukladki ngokuvamile sise ohlangothini phansi umbhoshongo. Futhi-ke kungenziwa kahle singatsheki e izindlu ngaphansi umbhoshongo. shot Jwayelekile kule ndawo kuthinta kuphela wakhe, futhi ukushaya boeukladku, udinga ukusebenzisa icala ephezulu alufakwa.